यस्तो एउटा दृश्य | मझेरी डट कम
editor — Sat, 11/07/2015 - 18:57
युवीनले रजितालाई मन पराएको छ वर्ष बितिसकेको थियो । मायाको बारी खोज्दै दुईले जिल्लाभरिको पोखरी, डाँडापाखा र घाँसदाउरा गर्ने ठाउँ कुल्चिन कतै बाँकी राखेका थिएनन् । तर युवीनको भरपर्दो रोजगारी नभएकोले उसले रजिताका आमाबाबुसँग रजिताको हात माग्न सकेको थिएन जब कि युवीनका बाबुआमालाई रजितालाई बुहारी बनाउन कुनै आपत्ति थिएन । एकतर्फी मञ्जुरीले मात्र काम नलाग्ने भएपछि युवीन लोकसेवामा भीडेको भीडै थियो संगसँगै उसले सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरूको आफ्नो योग्यता मिल्दो कुनै पनि पदमा आवेदन दिन छुटाएको थिएन । तर युवीनको छेउछाउ सफलताले आउनै मानेकी थिइनन् । त्यसैले दुवैको मनसुवा सफल हुन सकिरहेको थिएन ।
तर अचानक एक दिन हेटौंडाको साबुन फ्याक्ट्रीबाट उसलाई अन्तरवार्ताका लागि टेलिफोनमार्फत बोलाइयो । युवीन र रजिताले सफलताको कामना गरे । तर युवीन गएको भोलिपल्टदेखि नै विभिन्न मागराख्दै राजनैतिक दलहरूले नारायणगढ— हेटौडा क्षेत्र अनिश्चितकालका लागि बन्दको घोषणा गरे ।
घरबाट हेटौंडा हिंडेको आठौं दिनमा मात्र युविन घर फर्कियो । ऊ घरमा झोला फालेर रजितालाई भेट्न हतारिएको थियो । तर घरको मुलढोकामै रजिता भेटिई । रजिताको पहिरन देखेर युविन अक्क न बक्क पर्यो । मुखबाट बोली फुटेन उसको ।
रजिताले नै हाँस्दै भनिन्— धेरै हैरान नहोऊ युवीन । अब म तिम्री प्रेमिका होइन हजुरआमा हुँ । तिम्रो नोकरीको प्रतीक्षामा मैले कहिलेसम्म पर्खिनुपर्ने हो के था ? त्यसैले धादिङ्घ मेन बजारको घडेरी, दुई बिघा खेत र दश लाख रुपैया मेरो नाममा नामसारी भएपछि म तिम्री हजुरआमा बनेकी हुँ । सम्पत्ति आफ्नो नाममा आउने यस्तो सजिलो उपाय हुँदाहुँदै व्यर्थै तिमीलाई पर्खेर मैले आफ्नो समय र यो सुन्दर जवानी किन खेर फाल्नु भनेर मैले गरेको निर्णय तिमीलाई कस्तो लाग्यो ? मलाई पोइ चाइएको होइन क्याः युविन । विचरा तिम्रो हजुरबाले गर्नै के सक्छन् र सम्पत्ति दिन बाहेक । अब अर्को हप्तातिर बुढासँग पारपाचुकेका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन्छु । नेपालको कानून, आइमाईले अलि अलि राइदिएपछि र लोग्नेले हेला गर्छ, कुट्छ, पिट्छ भनिदिएपछि त लोग्नेमान्छेको त व्याण्ड नै बजिहाल्छ नि ।...अँ, हजुरबासँग पारपाचुके भएपछि नाति पो मेरो नजिक आउने हो कि कसो ?
वाक्य समाप्तिपछि रजिताले घरै उचाल्नेगरी हाँसेको हाँसो युवीनले सुनेन । किनभने ऊ त अघि नै बेहोस भएर लडिसकेको रहेछ ।
हालः एकताबस्ती, बुढानिलकण्ठ न.पा.
यतै कतै मुटुभित्र माया चोरिएको थियो
भक्तपुर किन बिरामी